Ngaba unganditsho konke malunga nenjini yokukhangela kwi-Amazon kunye ne-algorithm yayo ekhethekileyo?
Awukho-brainer, kodwa ngokungafani naliphi na iinjongo zokusesha zendalo (njenge-Google ngokwalo, okomzekelo, ezilungiselelwe ukukhangela ulwazi jikelele), injini ethile yosesho e-Amazon yenzelwe ngokuyinhloko ukunceda abathengi ngokuqhuba i-intanethi kuthengwa kwi-webshops zokuthunyelwa kwehla. Ngokucacileyo, i-algorithm ye-injini yokuqhuba i-Amazon inika amaxabiso angama-organic kunye namaxabiso avumela i-brand-quality capitalization kuyo yonke i-intengiso yomthengisi. Ngokwezibalo zamva nje, kukho abangaphezu kwama-200 amabhiliyoni ophando lwabathengi abaqikelelwayo kwi-platform ye-ecommerce ephakamileyo ephakamileyo kulo nyaka. Kwaye akumangalisi nto, ngenxa yokuba uphando olutshanje luphandle into engama-55% yabathengi ababenokuzama ukufuna umkhiqizo wokuqala kwi-Amazon.
Ngoko, umbuzo - yiziphi iimpawu eziphambili ze-injini yokusesha kwi-Amazon? Yaye yintoni na ukuba abathengisi abahamba phambili bangathengisa khona iimveliso zabo ziboniswe ngokugqithiseleyo omnye umgca phambi kwabo bonke abathengisi abakhutheleyo? Nantsi imfutshane kakhulu kodwa mhlawumbi impendulo epheleleyo - injini yosesho e-Amazon ngokuqinisekileyo iyafana ne-Google algorithm. Ukusuka kolunye uhlangothi, nangona kunjalo, ibonakala ihluke ngokupheleleyo kunye naleyo esetyenziswe yinto enkulu yokukhangela yehlabathi. Ngezantsi ndiya kuba nomboniso omfutshane wokubambisa zombini iipropati zabo ezifanayo, kunye neengongoma eziphambili zohlukeneyo.
Masibhekane nayo - zonke iinjongo eziphambili ezifana ne-Google zijonge ngokubaluleka nokubaluleka. I-Amazon ayikho into ekhoyo apha, kuba isebenzisa amagama abalulekileyo kunye nomxholo wephepha kunye nemibhalo yonkcazo yesigxina ukucacisa nokusekwa kwemveliso kunye nokubaluleka kokukhangela kwento ekhangeleleneyo..I-exception kuphela yinto engafani ne-Google, injini yokukhangela kwi-Amazon ihlalutya idatha encinci yedatha, ngenxa yenkcazelo ehlelwe ngakumbi kwiinkalo zemveliso kwaye ixhaswe ngeempawu ezinxulumene nesigaba, umzekelo, njengesisindo, ubungakanani, izinto, njl.
Iimpawu eziphambili kunye ne-Long-Tail Phrases
Ukuba nomxholo osemgangathweni ocebileyo ngegama elingundoqo kunye nemigca eyimfuneko emininzi kubalulekile kwi-algorithm ye-Amazon yohlobo lwe-Amazon. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba kukho iipropati ezingabonakaliyo ngokupheleleyo zegama elibonakalayo kuloo ndawo yemakethe.
Ngomxholo wengxelo yakutshanje malunga ne-Amazon Retail Analytics, nakhu iingongoma eziphambili ukunika ingqwalasela echanekileyo:
amagama angundoqo ngevolumu ephezulu yokukhangela ngokuqhelekileyo iguqula kakuhle kwi-Amazon.
Idatha yokuthengisa yokusebenza kwimikhankaso ye-PPC ikunceda ukunquma ukuba yiyiphi na amagama angundoqo anemigangatho ephezulu yokukhangela ngaphaya kwayo.
Ngokuqhelekileyo, akunakwenzeka ukucacisa okanye ubuncinci ukutyhila umqulu okhoyo okhoyo okhoyo kumbuzo othile wegama elingundoqo elisetyenziswa ngabathengisi abakhutheleyo kwi-Amazon.
Ukuhlaziywa kwabathengi kunye neengqinisiso zibaluleke kakhulu kwi-injini yokusesha e-Amazon, njengengxenye yengonyama yamagama angundoqo angabonwa ngokuthe ngqo kumacandelo eengxelo.
Xa kuthatyathwa ngokwahlukileyo, izinga lokuguqula ngokwayo lingabonakala lingabalulekanga kangako kwi-Amazon ngaphandle kweenjini eziphambili ezifana ne-Google. Ngokucacileyo, abathengisi abaninzi babone ubungqina bokuba ezo zinto zineendlela ezininzi (kwaye ekugqibeleni, ukuthengiswa) kunokuthatha izithuba eziphezulu, ngoko ke ushiya ukuguqulwa okuncane emva kwayo.